Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Axmaarada oo Ku Guulaystay Qayb Kamid Ah Dadaalkoodii.
Shacabka Axmaarada oo Ku Guulaystay Qayb Kamid Ah Dadaalkoodii.
Posted by Dulmane	/ May 7, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay shacabka Xabashidu kubiyo keeneen taliska wayaanaha, isla markaana ka gaadheen guulo dhowr ah.
Sida xogta aan kuhelayno shacabka kudhaqan Gobolka Axmaarada ayaa gaadhay qayb kamid ah guuliyii ay rajaynayeen, waxayna taliska wayaanaha ku qasbeen in uu ula dhaqmo sifiican kadib halgan dheer oo ay ugaleen aayahooda iyo nolosha shacabkooda.
Maamulka wayaanaha ayaa lasheegayaa in ay xabsiga kasiidaayeen 3591 qof oo shacab ah oo umaxaabiisnaa ciidanka wayaanaha, kuwaas oo dhamaantood laqaqabtay intii uu wadanka saaraa xukunka dag daga ah, waxaana lasheegayaa in ay xabsiyada kuhadheen tiro kale oo shacab ah.
Shacabka kudhaqan Gobolka Axmaarada ayaa kacdoon xoogan bilaabay sanadkii 2015, kaas oo ay kaga horjeedeen xukuumada wayaanaha iyo kuwa u adeega, waxayna shacabku gaadheen qayb ahaan heer ay hubka qaataan si ay isaga difaacaan ciidanka bahalka ah ee wayaanaha.
Dhinaca kale waxaa dhulka Axmaarada kasocda dagaalo waawayn oo u dhaxeeya ciidanka dhaqanka xun ee gumaysiga iyo ciidamada udagaalama xoraynta Gobolka, waxaana bilihii lasoo dhaafay dhacay dagaalo aad uwaawayn.
Iskusoo wada duub oo shacabka kudhaqan Gobolka Axmaarada ayaan kuqanacsanayn maxaabiis lasiidaayay iyo wasiiro lasiiyay, waxayna shacabku diyaar uyihiin in ay masiirkooda katashadaan.